Amnesty: Ciidamada CAR qalab mahaystaan - BBC Somali
Amnesty: Ciidamada CAR qalab mahaystaan
Image caption CAR waxaa kawada howlgala ciidamo nabad ilaalin iyo kuwa dalkaasi
Ayada oo la filayo in todobaad ka yar lagu soo doorto madaxweynaha cusub ee Jamhuuriuyada Bartamaha Afrika, ayaa warbixinta Amnesty International waxa ay muujineysaa agab xumida haysata ciidammada nabad ilaalinta dalkaasi u jooga.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dhaciifnimada nabad ilaaliyayaasha awgeed laga hortagi waayay weerarro bishii September ee sanadkii hore ka dhacay caasimada Bangui, kuwaasi oo ay ku dhinteen 75 oo u badan rayid.
Hay'adda ayaa sheegtay in ciidammada MINUSCA ay xataa awoodi waayeen in ay gargaar caafimaad u fidiyaan ama ay soo daabulaan dadkii ku waxyeeloobay rabshadahaasi.
Mid ka mid ah saraakiisha ugu sareysa nabad ilaaliyayaasha Jamhuuriyada Bartamaha Afrika ayaa u sheegay Amnesty in aanay haysan qalab ku filan oo ay ku howlgali karaan.
Amnesty International ayaa ku baaqeysa in dib-u-eegis lagu sameeyo caqabadaha dhanka tasiilaadka ah ee haysto ciidammada nabad ilaalinta ee MINUSCA iyo weliba sababaha keenay in ay rayidka ka difaaci waayaan weerarradii dhacay September-tii lasoo dhaafay.